Isahluko 75 | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Konke kuzogcwaliseka ngokushesha lapho amazwi Ami ekhulunywa, ngaphandle kokuphambuka nokuncane. Kusuka manje kuya phambili, zonke izimfihlakalo ezifihliwe ngeke zisafihlakala noma zicashiswe nhlobo, futhi ziyokwambulwa kinina—madodana Ami athandekayo. Ngizonenza nibone ngisho izimfihlakalo ezinkulu ngokwengeziwe. Lezi zinto nakanjani zizonimangalisa futhi zininike ukungiqonda okungcono Mina, Nkulunkulu onamandla onke, futhi zinivumele ukuba nazise ukuhlakanipha Kwami okuphakathi kuzo. Namuhla nibhekana noNkulunkulu wangempela oyedwa abantu abangakaze bambone kusukela ekudalweni, futhi akukho okukhethekile Ngami. Ngiyadla, ngiyaphila, ngiyakhuluma, futhi ngihleka nani, futhi ngihlala nginani, lapho ngesikhathi esifanayo ngihamba phakathi kwenu. Kulabo abangakholwa noma abanemibono emibi yabo, lokhu kuyisiphazamiso. Lokhu kuwukuhlakanipha Kwami. Ngizokwambulela futhi abanye abantu izinto ubuntu Bami obejwayelekile obungazazi, kodwa lokhu akusho ukuthi angiyena uNkulunkulu uqobo Lwakhe. Ngokuphambene, leli phuzu lanele ukufakazela ukuthi nginguNkulunkulu onamandla onke. Kubantu abakholwayo, leli phuzu linomthelela onqumayo, futhi ngenxa yaleli phuzu nje banokuqiniseka okungamaphesenti ayikhulu Ngami. Ungakhathazeki ngokwedlulele; ngizokwambula izinto kuwe ngazinye.
Ngenxa yenu, ngisobala futhi angifihlakele. Nokho, kwabangakholwa—labo abakhohlisayo, abakhohlakaliswe nguSathane kuze kube sezingeni elithile—ngiyohlala ngifihlakele kubona. Nokho, lapho ngikhuluma ngaphambili ngokuzambula kubo bonke abantu, bengikhuluma ngokulunga, ukwahlulela, nobukhosi Bami, ukuze bazi emphumeleni abawamukelayo ukuthi ngiphethe zonke izinto ezulwini nasemhlabeni. Yenzani ngesibindi! Phakamisani amakhanda enu nje! Ningesabi: Mina—uYihlo—ngilapha ukunisekela, futhi ngeke nihlupheke. Uma nisavama ukuthandaza futhi ninxusa phambi Kwami, ngiyoninika konke ukukholwa. Labo abasemandleni bangabonakala benesihluku ngaphandle, kodwa ningesabi, ngoba lokhu kungenxa yokuthi ninokukholwa okuncane. Uma ukukholwa kwenu kukhula, akukho okuyoba lukhuni kakhulu. Halalisani futhi nigxume ngokuzokwanelisa izinhliziyo zenu! Konke kungaphansi kwezinyawo zenu futhi kusezandleni Zami. Ngabe ukufezwa noma ukubhujiswa akunqunywa yizwi Lami elilodwa?
Labo engibasebenzisa manje bonke bavunywa Yimi kudala, ngamunye ngokulandelana kwabo. Okungukuthi, labo bantu eqenjini lamadodana angamazibulo sebevele bamisiwe, futhi bamiswe kusukela ngidala umhlaba. Akekho ongakuguqula lokhu, futhi konke kufanele kube sekuyaleleni Kwami. Akekho umutu ongakwenza; konke lokhu kungamalungiselelo Ami. Kimi, konke kuyokwenziwa kuqine futhi kuphephe; Kimi, konke kuyokwenziwa ngendlela nangokufanele, ngaphandle kokudla namancane amandla. Ngiyakhuluma bese kudaleka; ngiyakhuluma bese kwenzeka. Njengoba isimo samazwe omhlaba sinesiyaluyalu, kungani ningaphuthumile ukuqala ukuqeqeshwa kwenu? Niyolinda kuze kube nini? Ngabe niyolinda usuku lapho abamanye amazwe bethutheleka eChina ukuzohlangana nani? Kungenzeka ukuthi nenze kancane ngaphambili, kodwa anikwazi ukuqhubeka nokuzitotosa! Madodana Ami! Cabangelani izinhloso Zami ezinesineke! Labo abasondela Kimi kakhulu ngokwengeziwe bayozuza konke. Aningethembi?
Isivinini somsebenzi Wami siwukuphazima kombani, kodwa nakanjani asiyiwo umsindo wokuduma kwezulu. Niyayiqonda incazelo yangempela yala mazwi? Kufanele nikwazi ukuhambisana kangcono Nami nokucabangela izinhloso Zami. Nifuna ukwamukela izibusiso, kodwa futhi nesaba ukuhlupheka; ngabe lokhu akukhona ukuba nemibono ephikisanayo? Ake ngikutshele! Uma umuntu efisa izibusiso namuhla kodwa engenzi yonke iminikelo ekufezekeni kwalokho, khona-ke konke azokuthola ngukujeziswa nokwahlulela Kwami. Nokho, labo abenza konke ukunikela bayozwa ukuthula kuzo zonke izinto futhi babe nakho konke ngobuningi, futhi konke abakwamukelayo kuzoba yizibusiso Zami. Okudingeka ngokuphuthumayo namuhla ukukholwa kwenu, futhi ukuba nikhokhe inani. Ningahumushi kabi izinhloso Zami. Konke kuzokwenzeka, futhi nizokubona ngamehlo enu futhi nikuzwe mathupha. Kimi, akukho nelilodwa izwi elingaqinisile noma elingamanga; konke engikushoyo kuyiqiniso ngokuphelele, kodwa akuntuli ukuhlakanipha. Ungakholwa okuyingxenye futhi ungabaze okuyingxenye. Yimi engifeze konke phakathi kwenu, futhi Yimi obuye ahlulele futhi aqondise labo abenza ububi. Ngiyanithanda, futhi ngiyaniphelelisa. Kubo, nokho, ngingokuphambene ngokuphelele: inzondo nembubhiso, ngaphandle kokuxegisa futhi ngaphandle kokushiya umsizilo. Inala Yami ikhona kukho konke engikushoyo nengikwenzayo. Nike nakuhlola kancane kancane? Amanye amazwi ngiwasho kaningi, ngakho kungani ningakuqondi engikushoyo? Emva kokufunda amazwi Ami, ngabe konke kuyokuba njengoba kufanele? Ngabe konke-ke kuyafezeka? Aninanhloso yokucabangela inhliziyo Yami. Kungani ngithi nginguNkulunkulu onegunya eligcwele, ohlakaniphe kukho konke, oyedwa wangempela obheka ekujuleni kwezinhliziyo zabantu? Ngabe awukayiqondi incazelo yala mazwi? Ngabe usufunde ngekhanda ngalinye lamazwi engiwagcizelele? Ngabe ngempela asebe yizimiso zendlela owenza ngayo?
Ngimi phezu kwakho konke, ngibuka lonke izulu nomhlaba. Ngizokhombisa amandla Ami amakhulu nakho konke ukuhlakanipha Kwami kuzo zonke izizwe nakubo bonke abantu. Musani ukumane nenze konke eningakwenza ukuze nifune ukuthokoza njengamanje. Lapho zonke izizwe zomhlaba zihlangana, yikuphi okungeke kube ngokwenu? Noma kunjalo, ngeke nginenze nintule manje, noma nginivumele nihlupheke. Kholwani ukuthi nginguNkulunkulu onamandla onke! Konke kuzofezwa futhi kuye ngokuya kuba ngcono! Madodana Ami angamazibulo! Zonke izibusiso zizokuza kini! Ziyothokozelwa yini ngokungapheli, zihlinzekwe ngokungapheli, futhi zigcwale ngokuphelele!
Ngabe Umsebenzi kaNkulunkulu Ulula Njengoba Umuntu Ecabanga? Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II Baningi Ababiziweyo, Kepha Bayingcosana Abakhethiweyo Indlela Yokwazi Iqiniso